Ahoana no Fomba ny Vehivavy no mbola Tsy Nihaona taminareo hatramin'izay
Ahoana no Fomba ny Vehivavy no mbola Tsy Nihaona taminareo hatramin’izay
Rehefa mahita ny tovovavy tsara tarehy ianao te-hanatona, ny zavatra voalohany dia te-hanao dia ny manao ny masony. Raha toa ka mahazo ny fijeriny, mihazona fa ny masony ary hanome azy aina tsiky. Izany dia hanampy anao hanao ny tsara fahatsapana voalohany ny tovovavy amin’ny alalan’ny fanehoana ianao matoky, namana lehilahy. Ankehitriny, raha toa izy mitazona fa masony (na ny tarehiny izy ary avy eo dia miverina ao ianao) izy no manome anao sonia dia liana, ary ny fanasana hanatona. Aza miandry ny hafa fanasana, satria izany dia azo inoana fa ny mazava indrindra amantarana ny olona liana izy, dia hanome. Na izany aza, raha toa izy ka tsy mihazona ny fijeriny — na tsy mijery ao amin’ny tari-dalana tsara eo amin’ny masony, aza manahy. Mbola be dia be no azonao atao mba hanombohan-dresaka amin’ny vehivavy tsy fantatrao. Ankehitriny, ny fahazarana tsara mba hanana amin’ny manakaiky ny vehivavy dia ho foana ny handeha hiakatra any an-vehivavy ianao liana amin’ny marina izy.
Fa tsy, dia mahazo manahy momba manakaiky ny vehivavy sy ny mikiry miandry»ny fotoana tsara»(izay tonga na oviana na oviana). Fa raha toa ka manana na inona na inona fomba fanahiana rehefa nandeha niakatra ho any ny vehivavy, miandry ny manodidina fa»ny fotoana tsara»ihany no handeha hanao izay tebiteby ratsy. Plus, tsy te-ho ny lehilahy izay nahita nisy fisalasalana na ratsy kokoa ny lehilahy izay hovers manodidina ny ankizivavy. Ankizivavy filazana izany, ary avy hatrany dia nivadika ho eny. Fa, eto no atao rehefa mahita zazavavy iray liana ianao: Mankatò ny»roa-faharoa»fitsipika sy fotsiny ny mandeha manatona ilay tovovavy ao anatin’ny roa segaondra ny nahita azy. Miakatra ny zazavavy nefa tsy mieritreritra momba izany, dia tsy manao afa-tsy ianao hijery bebe kokoa, izany dia hisorohana izay fomba fanahiana avy naka ny. Mazava ho azy, mijanona ny ankizivavy eny an-dalambe dia handeha hijery hafa noho miakatra ny zazavavy kely amin’ny fisotroana. Raha liana ianao amin’ny fampiatoana ny fanombohana ny resaka amin’ireo vehivavy eny an-dalana, toy izao ny fomba hanaovana izany: Amin ny farany, nijanona ankizivavy mahafatifaty eny an-dalambe dia tsy hafa noho ny manakana ny olona iray raha toa ka very ary nila toro-lalana. Ny hany mahasamihafa azy dia izay fa tsy mitady lalana, fotsiny ianao mitady manana namana chat (izay vao mety hitarika ho amin’ny daty). Raha tsy mahatsiaro ho mahazo aina mitsambikina ho banter amin’ny vehivavy an-tsaina tsara, avy eo vao milaza na inona na inona ianao mahatsiaro ho mahazo aina nanao hoe. Tena midera na tsotra»Hi, aho _____»afaka manomboka ny resaka nifanaovany tamin’ny vehivavy iray eny tsara fotsiny. Maro ny bandy mieritreritra fa izy ireo no mila dazzle vehivavy hatrany amin’ny mahagaga fanokafana tsipika.
Ny marina dia, dia tsy
Ry zalahy ireo dia ho gaga fotsiny ny fomba hisy fiantraikany toy izany ny maha-azo itokiana azo.
Toe-tsaina afaka dia lavitra be dia be ry zalahy
Maro ny ry zalahy izay mifandray amin’ny zazavavy iray manana toe-tsaina»manantena aho fa ity tovovavy tia ahy»na»manantena aho fa hahazo ny maro». Ry zalahy izay dia fankatoavana-mitady sy ny vokatra-miankina tonga manerana ho toy ny tsy fahatokian-tena sy izay toe-tsaina afaka hahosotra ny ankizivavy ny fomba ratsy. Fa tsy, ianao dia te hitandrina mafana, tsara vibe manerana ny fifandraisana. Rehefa mihaona ny tovovavy, ianao te-hanana toe-tsaina miaraka amin’ny andalana ny»aho mahatahotra, ianao mahatahotra ny zava-drehetra mahatahotra». Manana ny mahafinaritra, ny fikarakarana-maimaim-poana ny toe-tsaina no mahazo azy mba hanomboka hahatsapa toy izany koa. Raha toa ka tsy afaka mahazo ny ankizivavy iray mba mahatsapa tsara rehefa izy no miresaka aminao, dia izy no nandeha mba te-hanana anao manodidina matetika kokoa. Fantatrao ve ny zava-Kanto ny Hatsarany manana vaovao an-tserasera coaching fandaharana mba handresy ny fomba fanahiana Tsindrio Eto mba Hianatra bebe Kokoa Ianao hianatra ny an-tampony ny paikady hanatsarana ny asa, ny fahatokiana, ny fomba fiainana, ary ny fitiavana-ny fiainana avy any ambony ny manam-pahaizana toy ny fiainana sy ny raharaham-barotra-mpijirika. Manomboka ny Mihaino Amin’izao fotoana izao Manomboka ny Mihaino Amin’izao fotoana izao ny zava-Kanto ny Hatsarany Bootcamp dia revolisionera sekoly ho an’ny lehilahy namorona ny tarika ny fihetsehana ara-tsosialy manam-pahaizana manokana fa efa an’arivony ry zalahy avy amin’ny olon-tsotra ny miavaka. Vakio ny Tantaram-Pahombiazana Mamaky Tantaram-Pahombiazana»AOC,Ny zava-Kanto ny Hatsarany»sy»Art ny Hatsarany an-Tsekoly»no voasoratra anarana famantarana Ny Kanto ny Hatsarany, Inc
← Manara-maso, jereo mari-pamantarana, ny SMS hafatra, ary kokoa Joker fanitsiana Chatroulette
Shinoa vavy - ny fiarahana amin'ny Aterineto ny vohikala - Hahita ny tena fitiavana →